Jawaab bixintii ugu horreysay ee Galaxy A51 waa la sifeeyaa waxayna muujinayaan naqshad la mid ah Xusuusta 10 | Androidsis
A-taxanaha Samsung wuxuu noqday kan ugu iibsiga badan Yurub iyo wixii ka dambeeya, kaliya maahan naqshadeynta boosteejooyinka, laakiin sidoo kale qiimaha iyo faa'iidooyinka ay na siiso. Ugu dambeyntii Samsung waxay ku guuleysatay inay garaacdo furaha si ay ula tartanto wajiga wajiga suuqa Aasiya.
Terminal-kii ugu horreeyay ee ay bilawdo shirkadda Kuuriya sannadka 2020, ama ugu yaraan mid ka mid ah kuwa ugu horreeya, wuxuu noqon doonaa Galaxy A51, oo ah dhaxal-dabiici ah shirkadda Galaxy A50. Intii aan ku sii dhowaanayay taariikhda la sii deynayo, turjumaano kala duwan ayaa lagu daadiyay halka aan awoodno naqshad aad ugu eg Galaxy Note 10.
Sida aan ku arki karno sawirrada la socda qodobkan, shaashadda A51 ayaa is dhexgeli doonta dalool yar oo ku yaal xarunta sare ee shaashaddaSida aaladda 'Note', laakiin marka lagu daro, xagga dambe, waxaan sidoo kale ka helnaa isku mid, maadaama ay lahaan doonto ilaa afar kamaradood. Cidhifyada qalabka ku wareegsan shaashadda, ayaa sidoo kale loo yareeyay ugu badnaan. Waxa u muuqda inay cadahay ayaa ah in Samsung ay dooneyso inay sameyso inta ugu badan ee nashqadeynta ah 'Note 10' ee bartamaha-dhexe iyo boosteejooyinka sare-dhexe ee ay dhawaan ka bilaabi doonto suuqa.
Xanta la daabacay ilaa maanta ee ku saabsan terminaalkan waxay muujineysaa inay yeelan doonto kamarad weyn oo 48 mpx ah (waxay u egtahay inay lamid tahay tan aan ka helno Xiaomi Mi 9T iyo 9T Pro oo ay soo saartay shirkadda Kuuriya), oo ay weheliso 12 mpx xagal ballaadhan oo ballaadhan, 12 mpx telephoto lens ah iyo kamarad 5 mpx ah si loo xisaabiyo moolka.
Badhamada muggu waxay ku yaalliin dhinaca bidix ee terminalka, waxay leedahay isku xidhka taleefanka dhegaha iyo dekedda USB-C oo ku taal salka hoose ee teermiga ku xiga afhayeenka. Helitaanka kaarka SIM iyo microSD wuxuu ku yaal bidix. Gudaha, Galaxy A51 ayay u badan tahay inuu maamulo Exynos 9611, oo ay weheliso 4/6 GB oo RAM ah iyo 64/128 GB oo keyd ah. Kaamirada hore waxay gaari doontaa 32 mpx waxayna yeelan doontaa batari 4.000 mAh ah oo la jaan qaadi kara 15W xawaare dheereeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Soosaarayaasha ugu horreeya ee Galaxy A51 waa la sifeeyaa waxayna muujinayaan naqshad la mid ah Xusuusta 10
PWN2OWN Ma maqashay tartanka haakarisku?